China China sy ny orinasa mpamokatra zava-pisotro misy alikaola sy alikaola soda Hanketo
Ny zava-pisotro misy gazy karbonika, ny akora ilaina indrindra dia ny: rano karbônika, asidra citrika ary zavatra asidra hafa, siramamy, zava-manitra, misy ny kafeinina, loko artifisialy, sns. tsy misy otrikaina. Ny mahazatra dia: coke, Sprite ary soda.
Masinina fisotroana karbaona na milina Coke. Io no masinina lehibe sy fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovana zava-pisotro misy gazy. Ny milina fisotro misy karbaona dia misy paompy sy sy paipa syrup, fantsom-pandrefesana, fantsom-pandrefesana sy fantsom-pametrahana, sivana rano, varingarina karbonika, sns. Ny zava-pisotro misy karbaona dia mazàna mitambatra amin'ny ranomandry amin'ny fizotran'ny fampiasana. Izy ireo dia vita amin'ny alàlan'ny famenoana gazy karbonika amin'ny zava-pisotro misy rano. Ny singa fototra dia ny siramamy, pigment, zava-manitra sns.
Ny fizotry ny famokarana zava-pisotro misy gazy dia azo zaraina ho fomba famenoana iray ary fomba roa famenoana.
Masinina famokarana zava-pisotro misy alikaola ary fomba famenoana indray mandeha
Izy io dia fantatra ihany koa amin'ny fomba famenoana alohan'ny famonoana, ny fomba famenoana vokatra vita na ny fomba fampifangaroana mialoha. Ny syrup manitra sy ny rano dia alefa ao anaty mixer zava-pisotro misy alikaola arakaraky ny ampahany sasany mialoha, ary avy eo mangatsiaka aorian'ny fangaroana habe, ary avy eo karbaona ny fangaro avy eo atsofoka ao anaty fitoeran-javatra.
Rano fisotro → fitsaboana rano → fampangatsiahana → fifangaroan'ny rano etona ← dioksidan'ny karbaona
Syrup → mifangaro → mifangaro → mameno → famehezana → fisafoana → vokatra
Kaontenera → fanadiovana → fanaraha-maso
Fitaovana famokarana zava-pisotro misy alikaola tavoahangy PET dia mampiasa ny haitao fitaterana tavoahangy tavoahangy mba hahatsapana ny fanasan-tavoahangy tavoahangy, famenoana, famonoana ary fomba hafa, miaraka amina automatisation avo lenta; Izy io dia miaraka amin'ny fifehezana tsindry CO2 marina sy fifehezana ny haavon'ny rano; Izy io dia miaraka amin'ny fitaovana fampitandremana fiarovana maro toy ny tavoahangy tavoahangy, tavoahangy tsy hita, banga tsy hita ary be loatra mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra; manana tombony amin'ny fahamendrehana avo, fahombiazana avo sy fandidiana mora. Ireo ampahany mifandray amin'ny fitaovan'ny milina famenoana alikaola dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, izay madio sy mora diovina.
Previous: Fitaovana fisotro sy tsipika famokarana
Manaraka: Masinina fanodinana rano madio